Bosaso University Oo Ardeyda Tababar U Qabatey (Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Communities / Bosaso University Oo Ardeyda Tababar U Qabatey (Sawiro)
Bosaso University Oo Ardeyda Tababar U Qabatey (Sawiro)
November 29, 2012 - By: Abdirahman Abdi
Tababarka ayaa ahaa mid loo qabtay dhammaan ardayda Jaamacadda Boosaaso kuwaas oo wax ka barta dhamaan kuliyadaha kala duwan sida:
Tababarka ayaa ka dhacay xarunta weyn ee Jaamacadda, iyadoo ay ka soo qeybgaleen marti sharaf lagu casuumay oo ardayda siinaayey macluumaad ku saabsan horumarinta bulshada qeybaheeda kala duwan, waxaana ka mid ahaa General Cali Ismaaciil oo isagu ah qoraa, kana tirsanaan jirey ciidankii xooga dalka Soomaaliya, waxaa uu madax ka yahay guddiga hormarinta magaalada Bosaso.
Ugu horeyntii waxaa furay barnaamijka Mohamed Mahad Ciise oo war bixin kooban ka bixiyey tababarka, kuna soo dhoweeyey gudoomiye ku xigeenka Jaamacadda Boosaaso Eng. Cadiraxman Farah Ali, Waxaana Injineerku ka sheekeeyey faa’iidada uu lee yahay tababarkan.
Sidoo kale waxaa ka hadlay Madaxa Academic Faarah Ahmed Muuse iyo waliba Maxamuud Shiikh Maxamed oo labadooda ka hadlay faa’iadada uu u leeyahay tababarkan ardeyda qeebaheed kaladuwan.
Tababarka oo ahaa mid ardaydu iyo marti sharaftu ay kawada qeyb qaadnaayeen ayaa lagu soo ban dhigay barnaamiyo badan oo aqoon isweydaarsi ah, waxaana daadihinaayey barnaamijka ardayda dhigata kuliyadda horumarinta bulshada iyagoona, cilmi baaris ku sameeyey sida loogu horseedi karo bulshada horumar iyo baraare waara.
Ugu dambeeyntii waxaa barnaamijka soo xiray General Cali Ismaaciil oo ah guudoomiyaha horumarinta gudiga magaalada Boosaaso, isagoo ku dhiirigaliyey ardayda cilmi baarista ay sameeyeen waxbadan uu ku saabsanaa, horumarkana kala hadlaayey.